दीर्घायु रहन जापानबाट सिक्न सकिने कुरा – जीवन शैली
Home /टिप्स एण्ड ट्रिक्स/दीर्घायु रहन जापानबाट सिक्न सकिने कुरा
जापान संसारमै मानिसको औसत आयु लामो भएको देश भनेर चिनिन्छ । सर्वेक्षणअनुसार जापान विश्व भरिमा महिलाको औसत आयु ८६ वर्ष र पुरुषको ८० वर्ष रहेको छ भने देश नेपाल को औसत आयु पुरुष ६७ वर्ष र महिला ६९ मात्र रहेको छ। यस्तो फरक किन त? जापानीहरू धेरै लामो समय बाच्नु अनि नेपाली धेरै बाच्न नसक्नु, यसका धेरै कारणहरु छन्।
जापानीले पनि प्रायः तीन चोटी नै खान्छन हामीले जस्तै। बिहान हल्का खाना, १२ बजेतिर बिहानको खाना अनि बेलुकाको खाना। तर, फरक यत्ति हो हामीले खाने खानासँग प्राय दाल, तरकारी र अचार मात्र हुन्छ भने उनीहरू खाने खानामा सन्तुलन मिलाइएको हुन्छ।
जापानीहरुको खानामा बनाउन थोरै (तेल मसला कम प्रयोग गरिएको अथवा उसिनेको) माछा, सुप, गेडागुडी, सीफुड, काँचो माछा, तोउफु उसिनेको तरकारी, अर्गानिक चिया आदि हुने गर्दछन। त्यसैले यस्ता खानेकुरामा शरीरको लागि आवश्यक पर्ने कार्बोहाईट्रेड, प्रोटिनलगायत अन्य भिटामिनको सन्तुलन मिलेको हुन्छ।
जापान यति धेरै विकसित भएपनि, खानेपानी, वातावरणलाई सोच्छ राख्नको लागि जापानी प्राय सधैँ आफ्नो घर होस् या शहर सफा राख्ने गर्दछन्।
जतिसुकै कामबाट थकित र व्यस्त रहे पनि बिहान एकचोटी नुहाएरै बाहिर जाने गर्दछन्, अनि बेलुका फर्केपछि पनि आधि घण्टा जति तातोपानी ओफुरो बसेर नुहाउने गर्दछन्।
३. स्वस्थ सेवा प्रणाली, बृद्ध अवस्थामा पनि काम गर्नु
जापानमा अनिवार्य स्वास्थ बीमा गर्नुपर्छ, जसले गर्दा जापानी वर्षमा कम्तिमा पनि १२ पटकभन्दा बढी आफ्नो नियमित चेकअप गर्ने गर्दछन्। परिणामस्वरूप, आफ्नो स्वास्थमा हुने परिवर्तन, गडबडीसम्बन्धी सबै जानकार रहने हुनाले सितिमिति ठूला रोग लाग्नबाट सजिलै सचेत रहने गर्छ।
यसैगरी जापानी प्राय काम गर्दा अल्छि नलागोस अनि शारीरिक व्यायाम होस् भनेर उभिएरै काम गर्ने गर्दछन्। धेरैजसो जापानी काममा जाँदा आफू बसेको ठाउँबाट ट्रेन स्टेसनसम्म पैदल हिँडेर जान्छन् अनि बल्ल त्यहाबाट ट्रेनको प्रयोग गर्ने गर्दछन्। अझ अनौठो कुरो त के छन्, बृद्ध अवस्थासम्म पनि स्फुर्त र स्वास्थ रहनको लागि यहाँ ६०-७० वर्षसम्म पनि मानिस काम गर्ने गर्दछन्।
जापान विश्वमा नै प्रविधिमा अगाडि छ। यहाँको आधुनिक उपचार पद्दतिले नै गर्दा जापानको बालमृत्युदर एकदमै न्यून रहेको छ। यसैगरी जति सुकै ठूलो बिरामी भए पनि आधुनिक प्रविधिबाट उपचारले गर्दा मृत्युको मुखमा पुगेका पनि लामो समयसम्म जिउन सकेका छन्।
त्यसैले, हामीहरुले पनि सम्भम्ब भएसम्म जापानीले गरेका कुराको सिको गर्न सक्यौं भने केहि लामो समय स्वस्थ, स्फुर्त भएर बाच्न सक्छौँ। हाम्रो देश नेपाल पनि जापानभन्दा कम छैन।
हामीसँग अथाह हरियाली जंगल छ कलकल बग्ने खोलानाला छन्। सागपात, गेडागुडी फल्ने खेतबारी छन्। सौखिन जीवन स्तरलाई त्याग्ने र खानामा सन्तुलन गर्ने हो भने हामी पनि धेरै वर्ष बाच्न सक्छौँ।